ကလေးတွေကို ပေးပြောလိုက်ပါ..ကိုဧရာရယ်.. ပေါ့..း))
ညံ့ချက်ကတော့ တူတူပါပဲ သီတာရေ့..း)
ဟုတ်ပ အေ.. မုန့်လုံးရေပေါ်ကလေး မနပ် ရုံနဲ့.. ကိုဧရာ့နှယ်.. အမျိုးကို ချီပြောရသတဲ့လား..း)
တကယ်တော့ ဟိုနှစ်တွေက ဆုံးသွား တဲ့ မမတို့ အဖိုး ဆို လဲ.. ဒီအတိုင်း ပဲ.. ဘာမှ မှားလို့ မရ.. ငါတို့ ဗမာတွေ က .. အစချီ.. အမြဲ ပွစိ ပွစိ မြည်တွန် တောက်တီး တာမို့ .. ပြောပါစေ လို့ ထားလိုက်ပါတော့ သီတာ ရေ..း)
ဒီလို အချိန်မှာ မုန့်လုံးရေပေါ် လုပ်စားဖြစ်တာကိုက အမှတ်တရ ဖြစ်နေပါပြီဗျာ။ အရသာမရှိတရှိ စားလိုက်ရတာကိုက ပိုလို့ အမှတ်တရ ဖြစ်နေအုံးမှာ သေချာပါတယ်။
မုန့်လုံးရေပေါ် မစားရတာ ဆယ်နှစ်ကျော်ပြီ မသီတာရ..
သင်္ကြန်ဆိုပေမဲ့လည်း ရှမ်းပြည်မှာဆိုတော့ မုန့်လုံးရေပေါ် မလုပ်ကြဘူး။ မငုံတို့မြို့လေးမှာက လာကန်တော့ကြတဲ့သူတွေကို ဟင်းထုပ်၊ ကြက်သွန်ကြော် ဒါတွေကျွေးတယ်။ ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာတော့ ထမင်းပေါ့. မငုံတို့မြို့က တန်ခူး၊ သီတင်းကျွတ်ဆို ခုနှစ်ရက်ခုနှစ်လီ ကန်တော့မပြီး၊ ဘုန်းကြီးကျောင်းတက်မပြီးပဲ...အခုနောက်ပိုင်းတော့..ကန်တော့လာသူတွေကိုကျွေးဖို့ ကျောက်ကျော၊ ရွှေကျီတွေ လုပ်လာကြတယ်။ ဟင်းထုပ်လုပ်တာကလဲ ကိုယ့်မိသားစု၊ ကိုယ့်ဆွေမျိုးရယ်၊ အရင်းနှီးဆုံးတွေစားဖို့လောက်သာ လုပ်တော့တယ်။ နည်းနည်းတော့ သက်သာရာကြောင်းရှာလာတာပေါ့ :) မငုံက ဒီနှစ်အိမ်ကိုလာကန်တော့သူတွေကို ကြက်သွန်ကြော်နဲ့ ကျောက်ကျော ကျွေးတယ်။
သီတာ့ရဲ့ မုန့်လုံးရေပေါ်အကြောင်းလေးဖတ်ရင်း တီတင့်တို့ငယ်စဉ်ကာလတုန်းက ကျွေးမေမေရဲ့ 'မုန့်လုံးရေအောက်'ကို သတိရသွားတယ် ...
သီတာကမှ ဟိုတစ်လုံးဒီတစ်လုံးတက်သေးတယ်ဟိဟိ။ အမှုန့်စပ်တာတွေ အချိုးမကျလို့ မုန့်လုံးက ရေပေါ်မပေါ်တော့ပဲ မြုပ်ရာကနေ မုန့်လုံးရေအောက်ကို ခပ်စားရတဲ့အခြေအနေဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ် :P
မ ကလဲအွန်လိုင်းမှာ လုပ်နည်းတွေရှိတယ်လေ. နောက်တခါဆို မသေချာရင်သွားသာကြည့်လိုက်. မရဲ့ညီမတော့အဲလိုSurviveဖြစ်နေတာ.
ကောက်ညှင်း နှစ်ဆ ဆန်တစ်တဲ့
အစ်မက ဆန်2ဆ လုပ်လိုက်မိလို.။